Muuri News Network » SAWIRO: Haweenka Ethiopia oo Qorshe Yaab leh ka bilaabay BAYDHABO.
SAWIRO: Haweenka Ethiopia oo Qorshe Yaab leh ka bilaabay BAYDHABO.
Oct 21, 2015 - Comments off
Haweenka ku jira Ciidamada Itoobiya ee qeybta ah howlgalka loogu magac daray Amisom ayaa kulan la qaatay, Ururada Haweenka eek u dhaqan Magaalada Baydhaba.
Kulanka oo sidoo kale ay ka qeyb qaateen mas’uuliyiinta Gobolka, kan Degmada, taliyaha qaybta saddexaad ee ciidamada amisom, Yemane Gabre Mikael, culummom, ururrada haweenka iyo saraakiil ka tirsan ciidamada amisom ayaa looga hadlayey sidii haweenka kaalin fir fircoon ay uga qaadan lahaayeen nabada Soomaaliya iyo amaan kusoo dabaalidda Dalka.
“Haweenku kaalin firfircoon ayay ka qaataan ka shaqeynta nabadda. Haweenku waa laf-dhabarka nolosha Soomaaliya. Waxaan idinka doonayaa inaad xoojisaan kaalintii nabadda iyo inaad bulshadana mideysaan. Taasina waa waddada keliya ee aan kaga adkaan karno Al-shabaab,” ayuu yiri Yemane Mikael.
Ciidamada Amisom eek u sugan qaar ka mid ah Gobolada dalka sida Baay iyo Hiiraan ayaa kulamo lagu kalsooni gelnayao bulshada la qaata halka kuwo kalana ay kalsooni la’aan dhigeen shacabka oo ka didsan dowladnimada.